အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသည်းရောဂါ(၃)မျိုး • Zifam Myanmar
🥃အရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသည်းရောဂါတွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖျဉ်းကြည့်ရင် သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အရက်သောက်သုံးသူရဲ့ ၉၀ % လောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရမ်းမဆိုးသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီး စနစ်တကျကုသမှုခံယူရင် များသောအားဖြင့်ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးရာကနေပြီး အသည်းဆဲလ်တွေရောင်ရမ်းတဲ့အဆင့် ထိရောက်လာတာပါ။ အရက်သောက်သုံးသူရဲ့ ၃၅ % လောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသည်းရောင်တဲ့အဆင့် ဆိုရင်တော့ အရက်လုံးဝမသောက်သင့်တော့ပါဘူး။ စနစ်တကျကုသရင်တော့ သူလည်း သက်သာနိုင်ပါတယ်။
အသည်းခြောက်တယ်ဆိုတာ အဆိုးဆုံးအဆင့်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ အရက်သောက်သုံးသူရဲ့ ၁၀% ကနေ ၂၀% လောက်ထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသည်းဆဲလ်တွေ ပြန်ပြင်မရတော့လောက်အောင် ပျက်စီးသွားပြီးတော့ ပုံမှန်အလုပ်တွေကို မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသည်းကကျုံ့သွားပြီး ဆိုးရွားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားလာရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အရက်သောက်သုံးတတ်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေကို သင့်တင့်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးမသောက်သုံးဖို့နဲ့ မကြာခဏသောက်တာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ အကြံပေးချင််ပါတယ်…..
Presented by #ZiLiv အဆင့်မြင့်အသည်းအားဆေး
အသည်းရောင် အသားဝါစီပိုးရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ…
အသက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေမှာရော ဘီပိုးကုလို့ရပြီလား…
© Copyright 2021. Zifam Myanmar. All Rights Reserved.